This Week - सबैको समाचार
काभ्रे : काभ्रेमा कार र बस एक आपसमा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन्। प्रहरिका अनुसार आज दिउँसो साँगाबाट बनेपातर्फ आउदै गरेको बा ३ ख २८४४ नम्बरको बस र बा ७ च १५४५ नम्बरको कार ठक्कर खाँदा दुर्घटना भएको हो। मृत्यु हुनेमा कलंकी सितापाइला निवासी बर्ष ५५ […]
म्याग्दी: रघुगंगा नदीमा भीषण वर्षासँगै आएको बाढीले स्काभेटर बगाएको छ। बाढीले राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको ड्याम साइडमा काम गरेर नदी किनारमा पार्किङ गरिराखेको ठाउँमा कटान गरेर स्काभेटर बगाएको हो। ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको बाँध रघुगंगा–४ मा निर्माणधीन अवस्थामा छ। मुक्तिनाथ बगैँचा निर्माण सेवाको ग १ क ५३३८ नम्बरको होन्डाई स्काभेटर नदीले बगाएर करिब २० […]
काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाले हैजा नियन्त्रणका लागि चट्पट र पानीपुरी बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा देखिएकाले बनेपा नगरको सबै वडामा फैलिन नदिन भोलि देखि पानीपुरी,चटपट,तथा सडकका दायाँबायाँ खानेकुरा ठेलामा राखि बिक्री गर्न रोक लगाइएको हो । बाटोबाटोमा ठेला गाडामा पानीपुरी, चटपटे तथा पानी खाँदा रोग फैलिने हुँदा नियन्त्रणका लागि ठेलागाडा पसल सञ्चालनमा […]
काभ्रेका टिपर चालक आन्दोलित
काभ्रेको पनौतीमा टिपर चालक आन्दोलित भएका छन । काभ्रेको ६ वटा नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने पनौती नगरपालिकामा टिपर चालक आन्दोलित भएका हुन् । नगरपालिकाले क्रसर र ढुङ्गा खानीबाट राम्रो राजस्व संकलन गर्छ । तर टिपर गुड्ने सबै सडक बन्द हुँदा पनि नगरपालिकाले सहजीकरणका लागि कुनै पहल नगरको टिपर चालक तथा ब्यवसायीहरूले […]
काभ्रेको बनेपामा बस दुर्घटना भएको छ । बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको कर्मचारी बाेकेको बा १ क ५७४७ नम्बरको बस आज दिउँसो दुर्घटना भएको हो । बस दुर्घटना हुदाँ ३० जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ । घाइतेहरुको उपचार शिर मेमोरियल हस्पिटल, भोमी हस्पिटल […]
काभ्रेका कुन पालिकाले कति ल्याए बजेट ?
काभ्रेपलाञ्चोक, ११ असार : काभ्रेपलाञ्चोकको १३ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति, कार्यक्रमका साथै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाका अधिकांश तहले अधिवेशन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । धुलिखेल नगरपालिकाले आगामी आवका लागि रु एक अर्ब ३५ करोडको […]
ठेकदारले भाडा नदिदा बनेपा नगरले लगायो सटरमा ताला, व्यवसायी आन्दोलित
काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाले भाडा नतिरेका सटरमा आज ताला लगाएको छ । नगरपालिकाले सटरमा ताला लगाएपछी व्यवसायीहरु आन्दोलित हुँदा बनेपा बसपार्क क्षेत्रमा तनाव सृजना भएको छ । सटर भाडा बापतको ३८ लाख ६० हजार रकम नतिरेको भन्दै नगरपालिकाले तीन वटा सटरमा आज ताला लगाएको हो । ताला लगाएकामध्ये इलाका हुलाक कार्यालय बनेपाको भवनमा रहेको सटरका ठेक्का […]
काभ्रेबाट को को भए नेकपा एसको केन्द्रीय परिषद सदस्य ?
काभ्रे: नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले काभ्रेका पाँच जनालाई केन्द्रीय परिषद् सदस्यमा मनोनित गरेको छ । मनोनित हुनेमा पार्टी जिल्ला कमिटी सचिब दिपक गौतम, नमोबुद्ध नगरपालिकाका निर्वतमान उपप्रमुख रामदेवी तामाङ, भुम्लु गाउँपालिकाका निर्वतमान उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठ, जिल्ला सचिवालय सदस्य प्रदिप लामा, र उद्धव थापा रहनुभएको छ । नेकपा एस काभ्रेको जिल्ला कमिटीको पदाकारी समेत हेरफेर हुने […]
काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाले ल्यायो ७४ करोड ४८ लाखको बजेट
काभ्रे : काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नमोबुद्धको दोस्रो नगरसभाको पहिलो अधिवेशनमा शुक्रबार नगर प्रमुख कुनसाङ लामाले नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख रत्नबहादुर लामाले बजेट पेश गरे । नमोबुद्धले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ७४ करोड ४८ लाख ४५ हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ […]
काभ्रेको बनेपामा बस दुर्घटना भएको छ । बस दुर्घटना हुदाँ एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ४० जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा भक्तपुरको लोकन्थली घर भएकी ५३ वर्षीया लेख कुमारी बस्नेत छिन् । बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा स्थित अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको कर्मचारी बाेकेको बा १ क ५७४७ नम्बरको […]
काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी सम्झौताको बाह्रवर्ष पुरा, उपभोक्ताले अझै पाएनन खानेपानी
काभ्रेपलाञ्चोक, १३ असार : काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरिएको बाह्रवर्ष भयो । तीन वर्षदेखि आयोजनाको काम ९८ प्रतिशत सकिएको जनाउँदै आइएको छ । तीन नगरका उपभोक्ताले आयोजनाको खानेपानी अझै पाउन सकेका छैनन् । गत वर्षको चैतसम्ममा जिल्लाका तीन पुराना नगरपालिका बनेपा, धुलिखेल र पनौतीको स्थानीयवासीका घर–घरमा २४ सै घण्टा स्वच्छ खानेपानी खानेपानी […]
काभ्रेपलाञ्चोक, १५ असार: मण्डनदेउपुर नगरपालिका–९ स्थित रायोबारीमा आज बिहान चितुवाले फार्मका ३ सय ५० वटा कालिज मारेको छ । स्थानीय पुण्यप्रसाद नेपालको योगगङ्गा वाइल्ड एण्ड च्याटलका ६ सय ५० कालिजमध्ये केही चितुवाले खाएको हो । बिहान ३ बजे कालिज मार्दै खाँदै गरेपछि स्थानीयवासीले देखेर चिच्याउँदा चितुवा भागेको थियो । मारेको ३५० मध्ये चितुवाले ६० वटा […]
माइक्रो बस र ट्रक ठोक्कियो, एकजनाको मृत्यु
काठमाडौं कोटेश्वरमा हाइसको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ५२ वर्षका पैदलयात्री देवकुमार सेन रहेका छन् । उनको उपचारका क्रममा बी एण्ड बी अस्पलतामा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । कोटेश्वरबाट सातदोबाटोतर्फ गइरहेको बा २ ख १२२१ नम्बरको हाइसले उनलाई ठक्कर दिएको हो । ओभर स्पिडमा रहेको हाइसले सेनलाई जोगाउन खोज्दा ०० ख […]
झापा सेवा समाज काभ्रेले गर्यो सामाजिक कार्यको थालनी
काभ्रे ; झापा सेवा समाज काभ्रेले सामाजिक कार्यको थालनी सुरु गरेको छ। झापा सेवा समाज काभ्रेले एक जनालाई १२ कक्षासम्म निशुल्क पढाउने भएको छ । झापा सेवा समाज काभ्रेले रोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ माहादेभ टारमा निवासी सितामाया तामाङ र ज्ञानबहादुर तामाङका छोरा प्रकाश तामाङ लाई प्रगती प्रभात एकेडेमिमा कक्षा ३ देखि १२ कक्षा सम्म […]
हनि ट्रयापको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेकी भावना तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निर्दोष नदेखिएको भन्दै तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । सोमबार थुनछेक प्रयोजनका लागि भएको सुनुवाइपछि भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश दिएका हुन् । ठगी, […]
काभ्रेली पत्रकार इश्वरी ओझाले नेपाल प्रेस युनियनको केन्द्रीय अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । हिजो प्रेस युनियन काभ्रे शाखाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पत्रकार ओझाले नेपाल प्रेस यूनियनको नवौ महाधिवेशनमा केन्दीय अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो । ओझा युनियनको वर्तमान उपाध्यक्ष समेत रहनुभएको छ । प्रेस युनियनको नवौँ महाधिवेशन साउन ६ र ७ गतेका […]
विश्व बैंकका उच्च अधिकारीले सुने काभ्रेका भूकम्प प्रभावितका अनुभव
काभ्रेपलाञ्चोक : सयपत्री फूलको माला र ढाका टोपीबाट भव्य स्वागत पाएका विश्व बैंकका उच्च अधिकारीले भूकम्प प्रभावितका अनुभव सुन्ने इच्छा शुक्रबार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको एक गाउँका स्थानीयवासीले पूरा गरिदिएका छन् । विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरुले विसं २०७२ वैशाख १२ गते ‘गोरखा भूकम्प’ जाँदाको अवस्था, स्थानीयवासीद्वारा त्यसको सामना र घर पुनः निर्माण र त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा साक्षात्कार गरेर […]
प्रेस युनियन काभ्रेको अध्यक्षमा नगेन्द्र अधिकारी
प्रेस युनियन काभ्रेको अध्यक्षमा नगेन्द्र अधिकारी सर्वसम्बत निर्वाचित भएका छन । काभ्रेको बनेपामा भएको सातौैं जिल्ला अधिबेशनबाट अधिकारीको अध्यक्षतामा १८ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति निर्बिरोध चयन भएको हो। संस्थाको उपाध्यक्षमा देबराज केसी, महिला उपाध्यक्षमा सम्झना हुमागाई, सचिव शुभराज अधिकारी, सहसचिव सचित खड्का, इन्द्र बहादुर थापा र कोषाध्यक्षमा सरोज अधिकारी निर्बिरोध चयन भएका हुन्। यस्तै खुल्ला सदस्यमा […]
पाँचखाल नगरद्वारा १ अर्ब २९ करोड ९६ लाखको बजेट सार्वजनिक
काभ्रे : पाँचखाल नगरपालिकाको ११ औ नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारीत भएको छ । नगरप्रमुख महेश खरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारीत भएको हो । नगरप्रमुख खरेलले नगरमा एक बर्ष भित्र रोजगारीको सिर्जना, बृहत सिंचाई योजना, स्वच्छ र सफा खानेपानीको पँहुच, नेपालमै पहिलो ग्रिन स्मार्ट सिटीको डिपिआर र कार्यको थालनी, प्राङगारिक खेति, […]
सार्वजनिक स्थलमा राखिएको निर्माण सामाग्री हटाउन पनौती नगरपालिकाको निर्देशन
काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा राखिएको निर्माण सामाग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ। एक सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाले सडकका दायाँबायाँ राखिएका विभिन्न निर्माण सामाग्री र घरायसी माल बस्तु नराख्न निर्देशन गरेको हो । सडकका दायाँबायाँ राखिएका विभिन्न निर्माण सामाग्रीले सर्वसाधारण र यातायातका साधनलाई ओहोरदोहोरमा समस्या भएको पालिकाले जनाएको छ । यस्ता सामाग्री तुरुन्त हटाउन र […]
काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले सरसफाईमा नविनतम कार्यक्रम ल्याएको छ । नगरप्रमुख टोक बहादुर वाईबाले नगरपालिकाको ११ औँ नगरसभामा सरसफाईसम्बन्धी आकर्षक योजना प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नगरपालिकाले नगल्ने फोहोर नगरबासीको घरघरबाटै खरिद गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । नगरबासीको घरबाट खरिद गरिएका त्यस्ता फोहोर नगरपालिकाले उद्योगलाई बिक्री गर्नेछ । यो कार्यक्रमले नगरबासीलाई गल्ने र नगल्ने फोहोर छुट्याउन समेत […]
काभ्रे, ११ असार । काभ्रेको भुम्लु गाउँपाकिाले आर्थिक बर्ष २०७९/ ०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक तथा एघारौ गाउँसभा सम्पन्न गरेको छ । भुम्लु गाउँपाकिालका अध्यक्ष प्रेम बहादुर भुजेलले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नू भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा पालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर शैक्षिक सुधारको कामलाई अगाडी बढाईने भएको […]
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) प्रियजनको स्वास्थमा सामान्य खराबि आउनाले मानसीक समस्या आईपर्न सक्नेछ । बाणीमा मधुरता छाउनाले कुल कुटुम्बहरुको साथ सहयोगमा बृद्यिहुने योग रहेकोछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष सजगरहनु पर्ने समय रहेकोछ । यात्रामा सजग रहनुहोला । बादबीवादको झमेलामा फस्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । बृष राशि […]
चितवन, १३ असार : चितवनको माडी नगरपालिका-६ स्याउलीबासमा छोराको खुर्पा प्रहारबाट आमाको मृत्यु भएको छ । स्याउलीबास निवासी अन्दाजी ३६ बर्षका अर्जुन तामाङले खुर्पा प्रहार गर्दा आफ्नै आमा अन्दाजी ५५ बर्षकी मायादेवी तामाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता नरहरि अधिकारीले बताए । अर्जुनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाे छ । शवलाई मुचुल्का गरेर भरतपुर पठाउने […]